Vaovao - Ny Teknolojia Elektronaly Elektronika Iraisam-pirenena Taizhou faha-7
Teknolojia Elektronika Elektronika Taizhou faha-7
Nanomboka ny 1 hatramin'ny 3 Novambra lasa teo, ny fampirantiana momba ny teknolojia electrothermal sy electronicsmal Taizhou faha-7 dia natao tao amin'ny Centre Expo International an'ny Taizhou. Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. dia nasaina handray anjara amin'ny fampirantiana ary naneho ny vokatra farany farany. Asehonay ny maha-matihanina, mijery mialoha, ary ny maha-azo antoka ny fitsitsiana angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana ho an'ny teknolojia electrothermal sy fitaovana.
Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. dia nampiasa tanteraka io fotoana io handray anjara amin'ny fifanakalozana, fifampiraharahana, fianarana ary fahatakarana ny takian'ny mpanjifa sy ny antenaina avo lenta kokoa momba ny singa fanafanana karbônika karbôna ao amin'ny tontolo farany misy antsika, manana izahay nahatratra ny tanjon'ny fanatanterahana ny vokatray manokana, ny fampiasana ny tombon-tsoa manokana ary ny fanatsarana ny vokatra ho avy. Ity fampirantiana ity dia nanitatra bebe kokoa ny fitarihan'ny orinasa sy ny lazany tao amin'ilay orinasa iray ihany, ary manana fahatakarana lalindalina kokoa sy feno momba ny orinasa tsara sy mandroso ao amin'ilay orinasa iray ihany, noho izany fampiroboroboana ny Teknolojia Elektronaly sy Fitaovana Elektronika Taizhou Iraisam-pirenena izany dia feno fahombiazana!
Amin'ity fampirantiana ity dia nasongadinay ireo singa farany nanaovanay fanafanana karbônika karbôna manokana ho an'ny fandroana kapoaka vita amin'ny vera sy ireo singa fanamafisam-peo karbonika avo lenta indrindra ho an'ny 1625 ° C.
Amin'ny fizotry ny famokarana vera mitsingevana, satria ny singa fanamafisam-peo karbonika silikôla dia ao anatin'ny tontolo fandroana tin tena mafy mandritra ny fotoana maharitra, dia misy fepetra hentitra manokana momba ireo singa fanafanana karbona silikona ho an'ny fandroana tin. Amin'ny ankapobeny, ny singa fanafanana karbôna silika dia tsy mahazaka ny harafesin'ny hafanana avo sy entona manimba. Noho izany, ny singa fanafanana karbôna silikônika ho an'ny fandroana tin dia tsy maintsy manana singa fanamafisana avo lenta miaraka amin'ny androm-piainana lava be.
Amin'ny tontolo henjana sasany, ny mpanjifa dia manana fepetra takiana henjana sy fepetra takiana amin'ny singa fanafanana ny singa fanafanana karbona silikona. Raha jerena izany, ny singa fanafanana karbôna silikona SICTECH dia namorona singa fanamafisam-peo karbonika hafanana avo lenta izay mihoatra ny maripana soran-karbaona silikona 1500 ° C, ka nahatratra 1625 ° C ny maripana niasa! Ary hanome ny mpanjifa karazan-tsafidy fanamafisam-pahefana avo lenta, vatan-tsolika fantsona karbaona karbonika avo lenta avo lenta, vatana fanamafisam-peo matevina HD, vatana fanamafisana poakaty avo lenta HD.
Ny fampirantiana ny teknolojia fampiroboroboana herinaratra sy fampitaovana herinaratra maharitra ao Taizhou mandritra ny telo andro dia nahasarika fanontaniana maro avy amin'ireo mpandray anjara. Ny mpiasan'ny Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd dia feno hafanam-po sy fihetsika matotra, ary koa vahaolana ho an'ny orinasa matihanina. Ny consultant dia nanazava ny fitsipiky ny fiasan'ny singa fanafanana karbônika sôlida, ny fampiasana fitandremana miasa sns. Amin'ny alàlan'ny fampandehanana feno, fampisehoana horonantsary, sns., Ny consultant dia manana fahatakarana sy fahatsiarovan-tena feno momba ny vokatray.
Tamin'ny alalàn'ity fampirantiana Teknolojia Elektronaly sy Elektronika Taizhou Iraisam-pirenena ity dia nihaona tamin'ny mpanjifa, mpaninjara ary namana erak'izao tontolo izao izahay. Nahatakatra sy nianatra ireo teknolojia farany sy fotokevitra amin'ny indostrian'ny fanamainana elektrika isika. Fantatsika fa afaka mandray anjara bebe kokoa amin'ny indostrian'ny fanafanana herinaratra sy ny fiarovana ny angovo ary ny fiarovana ny tontolo iainana isika. Manana fahatakarana lalindalina kokoa momba ny andraikitra sy andraikitra tokony hataontsika isika. Mino aho fa handroso mafy isika ary hihatsara!